Iindaba - Inkcazo yovavanyo lokungcangcazela lwePerkins 1800kW
Inkcazo yovavanyo lokungcangcazela lwePerkins 1800kW
Injini: I-Perkins 4016TWG
Enye into: uLoyoy Somer
Isantya esijikelezayo: 1500 rpm
Indlela yokupholisa injini: Amanzi apholileyo
1. Ubume obukhulu
Ipleyiti yokunxibelelana ngokwesiko idibanisa i-injini kunye nenye. Iinjini zilungiswe ngeefcrums ezi-4 kunye nezixhobo zokutshixa irabha ezisi-8. Kwaye enye into elungisiweyo ilungiswe ngeefcrums ezi-4 kunye nezixhobo zokuthintela irabha ezi-4.
Nangona kunjalo, namhlanje ii-gensets eziqhelekileyo, ezinamandla angaphezu kwe-1000KW, musa ukuthatha olu hlobo lwendlela yokufaka. Uninzi lweeinjini kunye nezinye izinto ezizenzekelayo zilungiswe ngekhonkco elinzima, kwaye izixhobo zokumothusa zifakwe phantsi kwesiseko se-genset.
Inkqubo yovavanyo lokungcangcazela:
Beka ingqekembe ye-yuan eyi-1 ethe nkqo kwisiseko se-genset ngaphambi kokuba injini iqale. Kwaye emva koko wenze isigwebo esibonakalayo ngokuthe ngqo.
Qalisa i-injini ide ifike kwisantya esilinganisiweyo, emva koko ujonge kwaye urekhode imeko yokuhamba yengqekembe kuyo yonke inkqubo.
Ngenxa yoko, akukho kugudluzwa kunye nokuxhamla okwenzekayo kwimali ye-1 yuan kwisiseko se-genset.
Ngeli xesha sikhokela ekusebenziseni i-absorber yothuko njengofakelo olusisigxina lweinjini kunye nenye into eyahlukileyo yee-gensets ezinamandla angaphezulu kwe-1000KW. Ukuzinza kwesiseko se-genset samandla aphakamileyo, esiyilelwe saze saveliswa ngokudibanisa uxinzelelo lwe-CAD, ukufunxeka kukothuka kunye nolunye uhlalutyo lwedatha, kufunyenwe kuvavanyo. Olu luyilo luya kusombulula iingxaki zokungcangcazela. Yenza ngaphezulu kunye nokunyuka okuphezulu ukufakela kunokwenzeka okanye kunciphise iindleko zokufaka, ngelixa kuncitshiswa iimfuno zesiseko sokunyuka kwesiseko (njengekhonkrithi). Ngaphandle koko, ukunciphisa ukungcangcazela kuya kunyusa ukuzinza kwee-gensets. Umphumo omangalisayo we-gensets yamandla aphezulu unqabile kokubini ekhaya nakumazwe aphesheya.
Ixesha Post: Nov-25-2020